သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအပေါ်လုပ်ဖို့ခုနစျပါးကြီးသောအမှုတို့ကို - သတင်း Rule
မိုဘိုင်းနည်းပညာမကြာသေးမီနှစ်ကျော်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားလမ်းလာသည်ဟုသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ, ထိုကိရိယာများကို အသုံးပြု. အခါကမိုဘိုင်းဖုန်းများမှကြွလာသောအခါလုပ်တိုးတက်မှုတွေထဲက functions တွေနှင့်အကျိုးအမြတ်၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးခံစားရန်ကျွန်တော်တို့ကို enabled ပြီ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတခါပဲ phonecalls နှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သွားရမည်အကြောင်း, ယခုကြှနျုပျတို့အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းကနေဓာတ်ပုံတွေရိုက်ယူနှင့်ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်း device မှစကားသံကိုအမိန့်ကိုလက်ခံရရှိအထိအလုပ်များကိုကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးလုပျနိုငျ. ဤတွင်ဆုံးမြေကွကှေဲမိုဘိုင်းတီထွင်မှုခုနစ်များမှာ.
ဌ social networking: ယနေ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်စုံလင် ကွန်ရက် သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အခြားသူများအကြားထိုကဲ့သို့သော Facebook နှင့် Twitter အဖြစ်ဆိုက်များမှတဆင့်မိသားစုနှင့်အတူ. သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့ခြိတျဆကျနိုင်အောင်အများစုဟာ screen ရဲ့ထိတွေ့မှာအလွန်လွယ်ကူ access ကိုခွင့်ပြုပါ, ဓာတ်ပုံများ upload, ဝေစုသတင်းအချက်အလက်များ, သင့်ရဲ့ status ကို update လုပ်နဲ့ပိုပြီးအနည်းငယ်မျှသာလုပ်ရတဲ့နှင့်အတူ. ထိုအလွမ်းဆွတ်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတစ်ဦးမေတ္တာနှင့်သူတို့အဘို့, ထို့နောက် Timehop app ကိုပင်သင်၏အသက်တာ၏ဒစ်ဂျစ်တယ် archive ကိုဖန်တီးပေး.
ဌ ဓာတ်ပုံတွေကိုယူ: စမတ်ဖုန်းများအပေါ်ကင်မရာများနှစ်ပေါင်းများစွာ ပို. ပို. ခေတ်မီဖြစ်လာကြပါပြီ, နှင့်ဤသင်တစ်ဦးဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာသို့စအခြားပစ္စည်းကိရိယာများဘို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲထွက်နှင့် ပတ်သက်. နေစဉ်ယခုသင်အရည်အသွေးမြင့်ဓါတ်ပုံကိုယူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသုံးနိုင်သည်ကိုဆိုလို. ထိုအခါနှင့်အတူ Google ရဲ့ Snapseed app ကို, သငျသညျဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်တဲ့ tools တွေကိုတစ်ခုနီးပါးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, အားလုံးသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းအဆင်ပြေမှ.
ဌ ဖျော်ဖြေရေးခံစားကြည့်ပါ: လူအတော်များများဟာယခုသူတို့အိမ်တွင်ပြောင်းရွှေ့သို့မဟုတ်လျှင်ပင်ပေါ်နေစဉ်ဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးခံစားသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြု. ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောအထူးကုတစ်ဦးအကွာအဝေးကနေတစ်ဆင့်လွှရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်အဖြစ်ဖျော်ဖြေရေးလည်းပါဝင်သည် streaming များက်ဘ်ဆိုက်များ, နားထောင်ခြင်း အ Streema app ကိုအတူအွန်လိုင်းရေဒီယို station ထောင်ပေါင်းများစွာ၏, သို့မဟုတ်အခြားသောအမှုအရာအကြား YouTube ဗီဒီယိုကိုကြည့်.
ဌ ဂိမ်းကစားခြင်း: သင်တစ်ဦးစမတ်ဖုန်းများလာတဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းဂိမ်းစက်ကိုလည်းရှိ. သငျသညျကဲ့သို့သောပျော်စရာနဲ့ Self-ရှင်းလင်းမိုဘိုင်းဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် သငျသညျအဖြေလှေ Build ဖြစ်ရမည် နံနက်ယံအသွားအပြန်တက် livening တစ်လမ်းအဖြစ်သင့်ရဲ့ device ပေါ်. တဖန်သင်တို့လည်းကဲ့သို့သောသောနေရာများမှာထိုကဲ့သို့သောအွန်လိုင်း slot နှစ်ခုနှင့်စားပွဲဂိမ်းအဖြစ်ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ် Springbok ကာစီနို, သင်တို့ရှိသမျှသည်သင့်လက်၌၏စွန်ပလွံမှဂိမ်းကစားခြင်းဖျော်ဖြေရေးတစ်ဥစ္စာဓနနဲ့ကို virtual လောင်းကစားရုံဂိမ်းမှာများစွာသောအမျိုးမျိုးခံစားနိုငျဘယ်မှာ.
ဌ အင်တာနက်: သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအွန်လိုင်းရနှင့်သင်ချင်တယ်အခါတိုင်းအင်တာနက်ဒီကောင်လေးကိုဖို့ကအလွန်လွယ်ကူစေသည်, သင်တို့နေရာဒီတော့နေပါစေ, သင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို web access နိုင်ဖြစ်ခြင်းခံစားနိုငျ. ယခု ပို. ပို. ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အဆင်ပြေအောင် သင်အွန်လိုင်းရသင့်မိုဘိုင်းအသုံးပြုတဲ့အခါသင်သည်လည်းမြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့် surfing အတှေ့အကွုံခံစားနိုငျ.
ဌ မထိုက်မတန် get: သင်အနည်းငယ်အကူအညီလိုလျှင်ကြောင့်အသွင်သဏ္ဌာန်သို့ရတဲ့နှင့်မထိုက်မတန်ရတဲ့မှကြွလာသောအခါ, သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းများ၏အကူအညီနှင့်အတူသင်လိုအပ်သည့်အကူအညီများကိုရနိုင်. သငျသညျအစားအစာများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအပေါ်အာဟာရသတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးမှအရာအားလုံးကိုပြုမည်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး apps များ၏အကွာအဝေးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်, စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခြေရာခံနိုင်တဲ့ tools တွေကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအကူအညီပေးနေသည်ဟုမှ. တဦးတည်းကြီးမြတ်ဥပမာဖြစ်ပါသည် NexTrack သာအခမဲ့မဟုတ်ကြောင်း app ကို, ဒါပေမယ့်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းပျော်စရာစေရန်စီမံခန့်ခွဲ!
ဌ တစ်ကိုယ်ရေးလက်ထောက်အဖြစ်အသုံးပြုပါ: သငျသညျရှိသည်သောစမတ်ဖုန်းပေါ် မူတည်., သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုစုစည်းပြီးနှင့်အကြောင်းကြားသငျသညျစောငျ့ရှောကျကူညီမယ့်ကိုယ်ရေးလက်ထောက်အဖြစ်သင့်ရဲ့ device ကိုသုံးနိုင်သည်. ဤသည်ကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်ကို အသုံးပြု. လည်းပါဝင်သည် Siri Apple ကသို့မဟုတ် Cortana မှ, Windows အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်နည်းပြ 10.
ရရှိနိုင်ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားတဲ့ functions တွေနဲ့အတူ, ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းကဲ့သို့သောဖြစ်လာကြပြီနည်းနည်းအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်.
← ရောဂါကိုတိုက်မှကင်ဆာရောဂါကုသအင်ဂျင်နီယာများကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်များကိုရှေ့ဆောင် Mark Zuckerberg ဟာ '' အမုန်း '' ၏ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်မွတ်စလင်များ၏ထောက်ခံမှုအတွက်ပြောသော →